Xiaomi ajoina iyo OIN, iyo Linux patent yekuchengetedza chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura iyo Open Invention Network (INO), yakaburitsa nhau kuti Xiaomi, imwe yevanogadzira mahombe mafoni, smart zvishandiso uye IoT mapuratifomu, ave nhengo yeOIN.
Nekujoinha OIN, kambani yakaratidza kuzvipira kwayo iine co-hunyanzvi uye isinga pindise patent manejimendi, sezvo zvakadaro Linux uye yakavhurwa sosi matekinoroji iri chikamu chakakosha cheXiaomi zvigadzirwa uye iyo kambani inotarisira kuenderera mberi nekuvandudza uye kusanganisa kweyakavhurika sosi software mune zvigadzirwa zvayo, pamwe nekutora chikamu mukugadzirwa kweLinux uye akasiyana akavhurwa sosi mapurojekiti.
Xiaomi ndeimwe yemakambani anotungamira e-smartphone munyika. Iyo kambani yakagadzawo inotungamira pasi rese mutengi AIoT (AI + IoT) chikuva, ine 351,1 mamirioni akachenjera michina yakabatana kune yayo chikuva kubva munaKurume 31, 2021, kusasanganisira mafoni emagetsi uye malaptop. Xiaomi zvigadzirwa zviripo munyika dzinopfuura zana nenzvimbo dzakatenderedza pasirese.
Nhengo dzeOIN dzakazvipira kusaisa mapepa ezve patent uye vakasununguka kubvumidza kushandiswa kwetekinoroji yezvivakwa muzvirongwa zvine chekuita neiyo ecosystem. OIN nhengo inosanganisira makambani anodarika mazana matatu nemazana mashanu, nharaunda nemasangano akasaina zvibvumirano zverayisense zvekugovana patent.
Pakati pevatori vechikamu vakuru veOIN, ichipa kuumbwa kwechikwata chepamutemo chinodzivirira Linux, makambani akadai seGoogle, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT & T, Juniper, Facebook, Cisco , Casio, Huawei, Fujitsu, Sony uye Microsoft.
Smartphones, smart devices, uye IoT tekinoroji iri kutyaira zvisingaenzaniswi kugona kwekuvandudza hukama hwehukama, kuwedzera sarudzo dzevaraidzo, kuita dzimba dzakangwara, uye kutyaira kugona kwebhizinesi. Nekuda kwehupfumi hwayo hwekutsvagisa kwehunyanzvi nekusimudzira kugona, Xiaomi yakagadzira huwandu hwakakura hwezvigadzirwa nemasevhisi, pamwe neyakaomesesa midziyo yehungwaru, "akadaro Keith Bergelt, CEO weOpen Invention Network. "Tinotenda kuti Xiaomi ajoina OIN uye anoratidza kuzvipira kwayo mukubatana kwehunyanzvi uye kusiri kwehasha kwemavara epamutemo patent."
"Xiaomi yakazvipira kupa zviripachena uye zvakavimbika zvigadzirwa kune vashandisi, kuti mhando yemhando yepamusoro iwanikwe kune vese," vakadaro VaCui, Mutevedzeri weMutungamiri weXiaomi Group. "Linux uye yakavhurika sosi tekinoroji chikamu chakakosha chezvinhu zveXiaomi. Tichaenderera mberi nekuvandudza nekubatanidza OSS muzvigadzirwa zvedu. Nekujoinha OIN, tiri kuratidza kuzvipira kwedu kusingaperi mukugadzira uye sosi yakavhurika. IzviIsu tinodada kutsigira Linux uye nekuvandudzwa kwemamwe akavhurwa sosi mapurojekiti nenzira isina chekuita nezve patent.
Makambani anosaina anowana mukana wemvumo yakachengetwa neOIN mukutsinhana nechisungo chekusamhan'arira kushandiswa kwetekinoroji inoshandiswa mune Linux ecosystem. Pakati pezvimwe zvinhu, sechikamu chekujoinha OIN, Microsoft yakaendesa kune vatori vechikamu veOIN kodzero yekushandisa anopfuura makumi matanhatu ezviuru zvemvumo yayo, ichivimbisa kusaishandisa kuLinux uye yakavhurwa sosi software.
Chibvumirano pakati penhengo dzeOIN chinoshanda chete kune zvikamu zvekugovera zvinowira pasi petsananguro yeLinux system ("Linux System"). Iyo rondedzero parizvino inosanganisira 3393 mapakeji, anosanganisira Linux kernel, Android chikuva, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice , Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL, nezvimwe. Pamusoro pezvisungo zvisiri zvechisimba, zvekudzivirirwa mukati meOIN, dziva repamutemo rakaumbwa, rinosanganisira patent dzakatengwa kana kupihwa nevatori vechikamu vane hukama neLinux.
OIN's patent group inosanganisira zvinopfuura 1300 patents, kusanganisira OIN Maoko iboka remvumo, inosanganisira imwe yekutanga tekinoroji matekinoroji anogadzira zvine simba zvewebhu zvemukati izvo zvinotarisira zviitiko zvehurongwa senge Microsoft's ASP, Sun / Oracle's JSP, uye PHP.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Xiaomi ajoina iyo OIN, iyo Linux patent yekuchengetedza chirongwa
MaboxLinux inopa chiitiko chisingakundike kune avo vanoda kushandisa Openbox muManjaro